News Medium - Career.com.mm
Internal HR & External…
Internal HR & External Marketing Management Seminar at UMFCCI by MESI Entrepreneur SMEs Sunday, September3at2PM -5PM
17/06/20170comment
Grab our gift voucher…
Grab our gift voucher worth USD 100 at Myanmar Entrepreneurs Carnival Networking Party, Tatmataw Hall, U Wisara Road, Yangon on Sunday 18.06.2017 from 3:00-5:00PM. "Keep Calm and Hire the Best."
"Window Server 2012 Installation…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း မှ ကြီးမှုး၍ System & Data Replication နည်းပညာရပ် များကို စိတ်ဝင်စားသော မြန်မာအိုင်တီလူငယ်များ ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်နေသော အိုင်တီပညာရှင်များ၊ MCPA Member များအတွက် Windows Server 2012 Installation and Replication သင်တန်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ (၁၁)..
“Linux Fundamental to Professionals”…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူ တာပညာရှင်အသင်းမှကြီးမှူး၍ IT နည်းပညာရပ်များကို စိတ်ဝင်စားသော မြန်မာလူငယ်များအတွက် Linux Fundamental to Professionals သင်တန်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၆) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းအား အခြေခံမှစတင်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သဖြင့် Linux အခြေခံ သိထားသူများနှင့် အခြေခံမရှိသူများပါ တက်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ NGO များ၌ အလုပ်လုပ်နေသော Network..
“Web (Backend & Frontend)…
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူ တာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ Web Development နည်းပညာရပ်များကို စိတ်ဝင်စားသော မြန်မာအိုင်တီ လူငယ်များနှင့် MCPA Member များအတွက် Web (Backend & Frontend) Development with Domain Driven Design Architecture သင်တန်းကို၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၆) ရက်မှ ဇူလိုင်လ (၃) ရက်နေ့အထိ..
MYEA အသင်းသားများနေ့ နှင့် ဟောပြောဆွေးနွေးပွဲ…
မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏ အသင်းသားများနေ့(Member's Day) အခမ်းအနားကို မင်္ဂလာခန်းမ၊ ပထမထပ်၊ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချု ပ် ( UMFCCI ) တွင် အသင်းသားများအချင်းချင်း ရင်းနှီးနွေးထွေးစွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အခမ်းအနားပြု လုပ် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းပွဲတွင် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဦးအောင်ထွန်းသက်မှလည်း "Corporate Governance for Family Businesses" ခေါင်းစဉ်အမည်ဖြင့် ဟောပြောဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ကျင်းပမည့်ရက်မှာ..
Recruitment Day at ibis…
Don't miss out Recruitment Day at ibis Styles Yangon Stadium. Date: March 05, 2016 (Saturday). Time: 09:00 - 15:00 About ibis Styles Yangon Stadium: ibis Styles Yangon Stadium is the..